Warbixinta Kormeerka | georgedixonprimary
Dugsiga Hoose ee George Dixon wuxuu soo marey Kormeeraha Ofsted ee Noofembar 2017 ee hoos ku qoran waxaad ka heli kartaa koob kooban oo xiriiriye ah si aad u aragto warbixinta oo dhan.
Soo koobida natiijooyinka muhiimka ah ee waalidiinta iyo ardayda
Tani waa dugsi u baahan hagaajin
Tan iyo kormeerkii hore, heerarka akhriska, qoraalka iyo xisaabta ayaa hoos u dhacay. Heerarka ayaa hadda kor u kacaya laakiin ardayda dhawaan ka soo tagay dugsigu si buuxda uguma aysan diyaarsaneyn waxbarashada dugsiga sare.
Illaa dhowaan, hoggaamiyeyaasha iyo guddoomiyayaashu ma aysan sameynin ku filan si ay uga hortagaan sharraxaadda barashada iyo barashada.
Waxbarashada laguma sheegin qiimayn lagu kalsoonaan karo. Sidaas daraadeed, ardaydu waxay leeyihiin figrado aqooneed iyo fahamkooda. Waqtigan xaadirka ah, waxoogaa macallimiin ah ayaan wali qeexin heerka saxda ah.
Taageerada ardeyda ugu yaraan-awood leh waxay ku kala duwan yihiin waxtarkooda. Ardayda dugsiyada dhexe waxay leeyihiin meelo badan oo ay ku daboolaan haddii ay tahay in ay ku guuleystaan ​​si ay ugu guuleystaan ​​kartidooda.
Waxaa jira meel loogu talagalay wanaajinta sii socoshada sanadaha hore si carruurta ay si wanaagsan ugu diyaar garoobaan barashada Sannadka 1aad.
Qaar ka mid ah ardayda ayaa ka maqnaanaya dugsi aad u badan iyagoo aan haysan sabab macquul ah oo tani waxay caqabad ku tahay waxbarashadooda.
Dabeecadda ciyaaraha, iyadoo hadda soo hagaageysa, waxay noqon kartaa mid aad u adag mararka qaarkood.
Dugsigu wuxuu leeyahay xoogaa soo socda
Hoggaamiyeyaashu waxay leeyihiin faham sax ah ee waxqabadka dugsiga. Waxay horay u keeneen horumarinta barashada iyo barashada.
Shaqaaluhu waxay u fiirsanyihiin daryeelka ardayda iyo inay noqdaan noocyo wax ku ool ah.
Waxbarashada jimicsiga (PE) waxay waxtar badan tahay oo waxay dhiirigelisaa ardayda inay ku dadaalaan siyaabo badan.
Akhlaaqda ardayda ee fasalka waa caadi ahaan. Akhlaaqda wanaagsani waa la abaalmariyaa anshax xumida lama aqbalo.
Hawlaha lagu ilaalinayo ardayda iskuulka nabadgelyo ku jirta waxay wax ku ool yihiin.
Qaar badan oo ka mid ah ardayda ugu awoodda badan ayaa horumar samaynaya sababtoo ah waxay si fiicaan uga jawaabaan rajooyinka sare ee barashada hadda.
Wixii faahfaahin buuxda fadlan riix bogga hoose.
George Dixon Warbixinta Ofsted